प्रेषित २३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२३ यहूदी न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई एकटक लगाएर हेर्दै पावलले भने: “भाइहरू हो, मैले आजको दिनसम्मै परमेश्वरसामु सफा अन्तस्करण राखेर जीवन बिताएको छु।” २ यो सुनेर प्रधान पुजारी हननियाले छेवैमा उभिरहेको मानिसलाई पावलको मुखमा हिर्काउने आदेश दिए। ३ तब पावलले तिनलाई भने: “ए कमेरो पोतेको पर्खाल, परमेश्वरले तिमीलाई हिर्काउनुहुनेछ। तिमी मोशाको व्यवस्थाबमोजिम मेरो न्याय गर्न बसेका छौ तर मलाई हिर्काउने आदेश दिएर के तिमी त्यही व्यवस्था उल्लङ्घन गर्छौ?” ४ तब वरपर उभिरहेका मानिसहरूले तिनलाई भने: “के तिमी परमेश्वरको प्रधान पुजारीलाई गाली गर्दैछौ?” ५ अनि पावलले जवाफ दिए: “भाइहरू हो, उहाँ प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भनेर मलाई थाह थिएन। ‘तिम्रा मानिसहरूको शासकविरुद्ध खराबी नबोल्नू’ भनेर धर्मशास्त्रमा लेखिएकै छ नि।” ६ अनि त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूमध्ये आधाजसो सदुकी र बाँकी अरूचाहिं फरिसी रहेछन्‌ भनेर थाह पाएपछि पावलले न्यायपरिषद्सामु ठूलो सोरमा यसो भन्न लागे: “भाइहरू हो, म फरिसी हुँ र फरिसीकै छोरा पनि हुँ। मरिसकेका मानिसहरू पुनर्जीवित हुनेछन्‌ भनेर मैले विश्वास गरेको हुनाले मेरो न्याय हुँदैछ।” ७ तिनले यसो भनेको हुनाले फरिसी र सदुकीहरूबीच भनाभन सुरु भयो र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूमा फाटो पऱ्यो। ८ किनकि सदुकीहरू मरिसकेको मानिस पुनर्जीवित हुन्छ भनेर विश्वास गर्दैनन्‌; तिनीहरू स्वर्गदूत वा कुनै अदृश्य जीव छ भनेर पनि विश्वास गर्दैनन्‌ तर फरिसीहरू भने यी कुराहरूमा विश्वास गर्छन्‌। ९ त्यसैले तिनीहरूबीच चर्को भनाभन भयो र फरिसी समूहका केही शास्त्रीहरू उठेर ठूलठूलो सोरमा कराउँदै तर्क गर्न लागे: “हामी यस मानिसमा कुनै गल्ती भेट्टाउँदैनौं; स्वर्गदूतले वा स्वर्गबाट कसैले तिनीसित कुरा गरेको पनि त हुनसक्छ . . .।” १० तिनीहरूको भनाभन झन्‌-झन्‌ चर्कंदै गएको देखेर कतै तिनीहरूले पावललाई लछारपछार पार्ने हुन्‌ कि भनेर सेनापति डराए। त्यसैले तल गएर पावललाई खोसेर ल्याई छाउनीभित्र लैजान उनले सिपाहीहरूलाई हुकुम गरे। ११ तर त्यही रात, प्रभु तिनको छेउमा उभिनुभयो र भन्नुभयो: “साहसी होऊ! किनकि तिमीले मेरो विषयमा यरूशलेममा राम्रो साक्षी दिइरहेका छौ, अब रोममा पनि तिमीले त्यस्तै साक्षी दिनै पर्छ।” १२ उज्यालो भएपछि यहूदीहरूले पावलविरुद्ध षड्यन्त्र रचे र तिनलाई नमारेसम्म केही खानपिन नगर्ने कसम खाए। १३ यसरी कसम खाएर षड्यन्त्र रच्नेहरू चालीस जनाभन्दा धेरै थिए; १४ अनि मुख्य पुजारीहरू र धर्म-गुरुहरूकहाँ गएर तिनीहरूले भने: “पावललाई नमारेसम्म एक गाँस मुखमा नहाल्ने गम्भीर कसम हामीले खाएका छौं। १५ अब यहूदी न्यायपरिषद्का सदस्यहरूसित मिलेर तपाईंहरूले सेनापतिलाई के कुरा प्रस्ट पार्नुहोस् भने, तपाईंहरू पावलको मामिला अझ राम्ररी छानबिन गर्न चाहनुहुन्छ। अनि सेनापतिलाई मनाएर पावललाई तल आफूकहाँ ल्याउन लगाउनुहोस्। तर त्यो तपाईंहरूकहाँ आइपुग्नुअघि नै त्यसलाई सिध्याउन हामी तम्तयार भएर बस्नेछौं।” १६ तिनीहरूले यसरी ढुकेर बस्ने योजना बनाएका छन्‌ भनेर पावलको भान्जाले सुने। त्यसैले छाउनीभित्र पसेर उनले पावललाई खबर गरे। १७ तब पावलले सैनिक अफिसरहरूमध्ये एक जनालाई आफूकहाँ बोलाएर भने: “यस ठिटोलाई सेनापतिकहाँ लैजानुहोस्, किनकि ऊसित सेनापतिलाई खबर गर्नुपर्ने केही कुरा छ।” १८ त्यसैले ती सैनिक अफिसरले पावलको भान्जालाई सेनापतिकहाँ लगेर भने: “कैदी पावलले मलाई बोलाएर यस ठिटोलाई तपाईंकहाँ लैजान आग्रह गऱ्यो, किनकि ऊ तपाईंलाई केही कुरा बताउन चाहन्छ।” १९ तब सेनापतिले उनको हात समातेर एकान्तमा लगे र उनलाई सोधे: “भन, तिमी मलाई के बताउन चाहन्छौ?” २० उनले भने: “यहूदीहरूले पावलबारे यथार्थ कुरा बुझ्ने बहाना बनाएर तिनलाई भोलि यहूदी न्यायपरिषद्सामु हाजिर गराउन तपाईंलाई आग्रह गर्ने सहमति गरेका छन्‌। २१ तपाईं कुनै हालतमा तिनीहरूको दबाबमा नपर्नुहोस्, किनकि चालीस जनाभन्दा धेरै मानिसले पावललाई नमारेसम्म केही खानपिन नगर्ने कसम खाएका छन्‌ र तिनीहरू पावललाई मार्न ढुकिरहेका छन्‌। तपाईंले वचन दिनेबित्तिकै आफ्नो कदम चालिहाल्न तिनीहरू तम्तयार छन्‌।” २२ तब ती सेनापतिले त्यस ठिटोलाई यस्तो आदेश दिएर त्यहाँबाट पठाए: “तिमीले मलाई यो कुरा खबर गऱ्यौ भनेर आफ्नो मुख खोल्दै नहिंड्नू।” २३ त्यसपछि आफ्ना दुई जना सैनिक अफिसरलाई बोलाएर तिनले भने: “दुई सय जना सिपाही, सत्तरी जना घोडचढी अनि दुई सय जना भालाधारीलाई आज राती नौ बजे सिजरिया जान तयार पारिराख। २४ साथै, पावललाई घोडा चढाएर राज्यपाल फेलिक्सकहाँ सुरक्षित पुऱ्याउन घोडाहरू पनि तयार गर।” २५ त्यसपछि तिनले यस्तो पत्र लेखे: २६ “महामहिम राज्यपाल फेलिक्सलाई क्लौडियस लायसिअसको अभिवादन! २७ यहूदीहरूले यस मानिसलाई पक्रेर मार्न लागेका थिए तर सिपाहीहरूको दलबलसहित म तुरुन्तै त्यहाँ पुगें र तिनलाई बचाएँ, किनकि तिनी रोमी रहेछन्‌ भनेर मैले थाह पाएँ। २८ अनि यहूदीहरूले आरोप लगाउनुको कारण बुझ्न मैले तिनलाई उनीहरूको न्यायपरिषद्सामु हाजिर गराएँ। २९ अनि मैले के पाएँ भने, उनीहरूले आफ्नै व्यवस्थाको कुरा लिएर तिनलाई आरोप लगाएका रहेछन्‌ तर तिनले मृत्युदण्ड वा जेल सजाय पाउन योग्य कुनै काम गरेको आरोप भने उनीहरूले लगाएनन्‌। ३० मैले तिनीविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको खबर पाएँ। त्यसैले म तुरुन्तै तिनलाई तपाईंकहाँ पठाउँदैछु र तिनीविरुद्ध जे-जे भन्नुछ, त्यो तपाईंसामु नै भन्नू भनेर आरोपकहरूलाई पनि आदेश दिंदैछु।” ३१ त्यसैले ती सिपाहीहरूले आफूले पाएको आदेशबमोजिम पावललाई राती नै एन्टिपाट्रिस पुऱ्याए। ३२ अनि भोलिपल्ट घोडचढीहरूलाई पावलसँगै जाने अनुमति दिएर तिनीहरूचाहिं छाउनी फर्के। ३३ तब सिजरिया पसेर घोडचढीहरूले राज्यपाललाई पत्र बुझाए अनि उनीसामु पावललाई हाजिर पनि गराए। ३४ त्यसपछि, राज्यपालले त्यो पत्र पढे र पावललाई तिनी कुन प्रान्तका हुन्‌ भनी सोधे अनि तिनी सिलिसियाका रहेछन्‌ भनी पक्का गरे। ३५ उनले यसो पनि भने: “तिम्रा आरोपकहरू पनि आइपुगेपछि म तिमीलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने पूरापूर मौका दिनेछु।” त्यसपछि, पावललाई हेरोदको दरबारमा लगी पहरा दिएर राख्नू भनी उनले आदेश दिए।